Sawirada cusub ee SM-W2018, Samsung taleefanka isku laaban ee soo socda ayaa la sifeeyaa | Androidsis
Sawirada cusub ee SM-W2018, Samsung taleefanka isku laaban ee soo socda ayaa xaday
Samsung waa mid ka mid ah kuwa yar soosaarayaasha oo wali sameeya taleefannada isku laaban (sidoo kale loo yaqaan nooca loo yaqaan 'clamshell type'), in kastoo taleefannadooda aysan hayn muuqaaladii hore, laakiin, waxay wataan astaamo dhammaadkeedu sarreeyo.
Maanta iyaga ayaa is og Sawirro qarsoon oo taleefanka Samsung ee laaban-kara ee soo socda, oo hadda loo yaqaan SM-W2018.
Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, Samsung SM-W2018 wuxuu keeni karaa laba shaashadood oo 4.2-inch ah oo xalka Full HD lagu xirayo naqshad macdan ah oo waliba ay ku jiraan kumbuyuutar xarfaha alfanumeric ah, halka dhanka dambe aad ka arki karto muraayad muraayad ah.
Kaamirada weyn, oo lagu sheegay inay tahay 12 megapixels, ayaa dhexda ku jirta, dhinaceeda waxaan ku aragnaa iftiin LED ah iyo akhristaha faraha oo na xusuusinaya qaabeynta Galaxy S8.
Astaamaha dhamaadka-sare ee taleefanka isku laabmaya
Waxaa lagu xantaa in moobiilka gudahiisa waxaan ka heli doonnaa processor Snapdragon 835 (in kastoo ay noqon karto Snapdragon 821), 6 ama 8 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keydinta gudaha ah.
Marka laga reebo kamaradda weyn ee 12 megapixel, kaamiro ayaa sidoo kale lagu daray shakhsiyaadka 5 megapixels iyo batari 2,300 mAh ah. Sida laga soo xigtay isha ka daatay moobilka waxaa laga yaabaa inuu leeyahay skaanka iris, inkasta oo sawirada aysan jirin wax raad ah oo taa xaqiijinaya.
Samsung waxba kama aysan sheegin qalabkanSidoo kale ma jiraan taariikho lagu dhawaaqi karo, laakiin qashin-bixiyaha ayaa sheegay in ay u badan tahay in la soo bandhigo bishaan, nasiib daro - iyo sidii caadiga ahayd - waxay u noqon laheyd mid u gaar ah suuqa Shiinaha.
Ma jiraa farqi u dhexeeya suuqa aaladda noocan ah? Dhowr bilood ka hor soo bandhigida Samsung Leadership 8, Taleefan dhexe / heer sare ah oo waliba laab laaban kara, kaasoo illaa iyo hadda guul yar gaadhay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sawirada cusub ee SM-W2018, Samsung taleefanka isku laaban ee soo socda ayaa xaday
Pro Evolution Soccer 2018 hadda waa loo heli karaa Android
30 Maalmood oo ah TV-ga tooska ah ee bilaashka ah iyo waxyaabaha la dalbado waxaa bixiya oo keliya Sky